Antso Manerantany Mitady ny Rariny Mampiray ny Mpanakanto Ao Guatemala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2017 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, Ελληνικά, Swahili, Français, русский, عربي, 日本語, Esperanto , English
Indira Jarisa Pelicó Orellana, iray amin'ireo niharam-boina tamin'ny famonoana “Hogar Seguro”, 17 taona izy no maty. Sary nataon'ilay mpanakanto Melsikana Claudia Navarro. Nahazoana alàlana .
Lasa voina mampalahelo iray ho an'i Guatemala ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Vehivavy tamin'ny volana Martsa 2017 rehefa maty may tao anatin'ny trano tantanin'ny fanjakana ho an'ny ankizy teo amin'ny manodidina ny tanàndehiben'ny Guatemala City ny ankizivavy miisa 41. Rehefa nohidiana tao amin'ny trano fatoriany noho ny fandosirana ny fananararaotana , voalaza fa nanomboka nandrehitra afo ny sasany tamin'ireo ankizivavy mba hanerena ny mpiambina hanokatra ny varavarana, kanefa tsy nety nanao izany ny mpiambina.
Maro tamin'ny heloka bevava izay nanaovana famotorana tao anatin'ny toeram-pialofana no nahitana fampijaliana sy fanasaziana tafahoatra hafa. Araka ny fantatra dia zazavavy tsy ampy taona notànan'ny fanjakana avokoa ireo tovovavy ireo . Toa hita fa milona sy ao anatin'ny tsiambaratelo ny asan'ny manampahefana amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fanomezana onitra ho an'ireo sisa velona sy ny fianakavian'ireo namoy ny ainy roa volana taty aoriana, rehefa niantso ny famonoana hoe Hogar Seguro (Trano Fialofana) ireo Goatemalteka maro.
Teo no niainga ny mpikambana sasany tao amin'ny fiarahamonim-pirenena ao Guatemala, izay nanomboka nanao fanentanana manerantany tamin'ny 15 May tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny tenirohy # NosDuelen56 ( “Tsapantsika ny fanaintainan'ny [Ankizivavy] miisa 56 “). Nizara sary miisa 56 ireo mpandray anjara , izay maneho ny sarin'ireo ankizivavy tsirairay avy maty na naratra tao anatin'ny trano may ary nataon'ny mpanakanto manerana izao tontolo izao izany mba hitakiana ny manampahefana ao Guatemala handray andraikitra momba izany .
Sary: Mirehitra ato am-poko ny anaranao .
Sioka: 15 taona i Yohana Desiré Cuy Urízar tamin'ny nitrangan'ny famonoana Hogar Seguro. Fandravahana nataon'i Baku Estrada
Sary: Hetsika manerantany ho an'ireo ankizivavy
Sioka: nanatevin-daharana ny hetsika manerantany ho an'ireo ankizivavy ireo fitaovana nomerika samihafa, onjam-peo sy fahitalavitra mihoatra ny 68.
Nanatevin-daharana ny [hetsika manerantany] ny mpanakanto miisa 56 avy amin'ny firenena 6 . Nanao sarin'ny endrik'ireo ankizivavy ao Guatemala izy ireo.
Azo jerena sy zaraina ao amin'ny Flickr, Instagram ary Facebook ireo sary rehetra ireo .Nanatevin-daharana ny antso ho amin'ny fandraisana andraikitra ireo fikambanana maro izay notarihan'ny sampam-baovao ao Goatemala Prensa Comunitaria ( “Vondrom-piarahamonin'ny Gazety “) ary nozaraina avy hatrany manerana ny sehatra fampitam-baovao miisa 50 sy tamin'ny kaontin'ny media sosialy an'arivony. Afaka mizara ny sary avokoa ny olona rehetra, manao pirinty izany, na mitondra izany amin'ny fihetsiketsehana mitaky ny rariny. Nanazava ny Prensa Comunitaria tao amin'ny Medium :
Antso mitady ny rariny amin'ny alalan'ny zavakanto, ny asa fanaovan-gazety, ny fikatrohana an-tserasera sy ny feminisma ny #NosDuelen56. Hetsika ho amin'ny fahatsiarovana miaraka ho fanajana ireo ankizivavy miisa 56 izay voahidy sy may tao amin'ny trano tantanin'ny fanjakana tao Goatemalà tamin'ny 8 Martsa tamin'ity taona ity  izany. 41 tamin'ireo ankizivavy ireo no maty vokatr'ity famonoana vehivavy ity ary 15 no naratra mafy.
Manana taha ambony mamelona fanairana amin'ny famonoana sy ny herisetra atao amin'ny vehivavy i Guatemala, vehivavy miisa 6.000 no niharan'ny fampijaliana, fandratrana na famonoana nanomboka tamin'ny taona 2000. Vehivavy iray amin'ny roa eo ho eo no misy mamono isan'andro araka ny antontanisa izay navoakan'ny vondron'ny mpisolovava Vehivavy ho an'ny Rariny, ny Fanabeazana ary ny Fanairana.